Wego လေကြောင်း, ဟိုတယ်, ခရီးသွား Books app ဆကျဆံ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျီပီအက်စ် & ခရီးသွား Apps ကပ » Wego လေကြောင်း, ဟိုတယ်, ခရီးသွား Books app ဆကျဆံ
Wego လေကြောင်း, ဟိုတယ်, ခရီးသွား Books app APK ကိုဆကျဆံ
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ⭐️ထိပ်တန်းခရီးသွား app ကို, အာရှပစိဖိတ် & အိန္ဒိယ
⭐အပေါ် Featured: Sky News အာရေဗျ, CNBC အာရှ, TechCrunch, tnooz, Straits Times, သြစတြေးလျ
⭐ဆုံး, သက်ဆိုင်ရာချောမွေ့စွာနှင့်အသုံးဝင်သောခရီးသွား App ကိုရရှိနိုင်
ရှာရန်နှင့်တစ်ချက်ချင်းအတွက်ခရီးသွားကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ် လေကြောင်းလိုင်းများရာပေါင်းများစွာကနေ Android ပေါ်မှာ Wego ရဲ့ခရီးသွား App ကိုအတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပေးသွင်းနှင့်ဟိုတယ်များခရီးသွားလာ။ ဒါဟာသင်သည်အစဉ်အလိုပါလိမ့်မယ်တစ်ခုတည်းသောခရီးသွား app ကိုဖွင့်!
အထူးသသင်ကူညီရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်း အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါနိမ့်ဆုံးခရီးသွားလာမှုစရိတ်များ, Wego စုစုပေါင်း airfare သို့မဟုတ်ဟိုတယ်နှုန်းထားများရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ရှေ့ပြေးဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခွန်, ဝန်ပိုနှင့်အခြားဆက်စပ်အခကြေးငွေပြသသောအားဖြင့်အဘယ်သူမျှအချိန်မှာအကုန်လုံးအံ့သြဖွယ်သင်သည်သင်၏ဘွတ်ကင်လုပ်သည့်အခါရှိပါသည်။
အဆိုပါ Wego ခရီးသွား App ကိုတစ်ဦးကယ်တင်တတ်၏ အစာရှောင်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုအတွေ့အကြုံအား 20 ဘာသာစကားများနှင့်ငွေကြေးကျော်၌တည်၏။ သင့်ရဲ့ဒေသကနေအကျွမ်းတဝင်, ဒေသခံအမှတ်တံဆိပ်ကနေစျေးနှုန်းများနှင့်အတူပြသကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလေကြောင်း (အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုနှင့်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်), ဟိုတယ်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အွန်လိုင်းခရီးသွားအေးဂျင့်များတစ်ဦးပြည့်စုံစာရင်းထဲကနေအကောင်းဆုံး airfare သို့မဟုတ်ဟိုတယ်နှုန်းထားများရွေးချယ်ပါ။
အဆင့်မြင့်စုစည်းခြင်းနှင့် filtering ကိုရှေးခယျြစရာ👍
Wego သင်ကိုက်ညီရန်သင့်ရှာဖွေရေးလိုအပ်ချက်များကိုဒီဇိုင်းနိုင်အောင်ရွေးချယ်စရာ sorting နှင့် filtering ၏ကျယ်ပြန့ပေးပါသည်။ လေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့်ဟိုတယ်ရှာဖွေရေးများအတွက် 20 ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်ကျော်နှင့်အတူ, သင်ပြသနိုင်ပါတယ် စက္ကန့်၌သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များအတွက်အများဆုံးသက်ဆိုင်ရာရလဒ်များကို.
အလွန်ထူးချွန် developer များ၏ Wego ရဲ့အဖွဲ့သေချာစေရန်မဆုပ်အနစ်အလုပ်လုပ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးသွား App ကိုဖြစ်နိုင်သမျှအမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများဖြစ်ပါသည်။ Wego သူတို့ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ် (နှင့်တခါတရံမတိုင်မီ!) အဖြစ်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုထည့်သွင်းထံအပ်နှံ, ရှေ့ဆက်ကြွင်းသောအရာ၏ရှိနေမည်။ သငျသညျခရီးသွားစျေးဝယ်တိုးတက်လာဖို့ဆိုဖြစ်နိုင်သောလမ်းရှိပါတယ်လျှင်, အသငျသညျကမကယ်မလွှတ်ပါလိမ့်မယ်စိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျကိုခစျြပါလိမ့်မယ် ပို. ပင် features တွေ👍
✓ 20 ကျော်ဘာသာစကားများအတွက်သာရရှိနိုင် - အာရဗစ်, အင်္ဂလိပ်, Bahasa အင်ဒိုနီးရှား, ပြင်သစ်, တရုတ်နှင့်အများအပြားကပို
✓ Wego Weekend ထွက်ပြေးဖို့ - သင်သည်သင်၏တည်နေရာပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးမယ့်တနင်္ဂနွေထွက်ပြေးဖို့များအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးကိုခရီးစဉ်ကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အသုံးဝင်သော app ကို
✓မကြာမီကရှာဖွေမှုများ - re-ရိုက်ထည့်ပါအသေးစိတ်အချက်အလက်ရန်မလိုပါင်ဒါ Wego သင်တို့အဘို့ထိုသူတို့ကယ်တင်
✓အပြည့်အဝနောက်ဆုံးပေါ်နှုန်းထားများ, ဓါတ်ပုံများ, သာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်ဧည့်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အတူဟိုတယ်စာရင်းများ featured ။
✓သီးသန့်ခရီးသွားမိတ်ဖက်သဘောတူညီမှုများအတွက် Wego Insider ရဲ့ကလပ်မှအခမဲ့အဖွဲ့ဝင်, ငါတို့ခရီးသွားကျွမ်းကျင်သူများထံမှလက်ကောက်ယူကမ်းလှမ်းမှု
သင်သည်သင်၏မှတ်၏အများဆုံးလုပ်သေချာစေရန်✓သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်ကို filter ကို (Wego Insider ရဲ့ကလပ်)
✓ဟိုတယ်မြေပုံလုပ်ဆောင်ချက်ကို - စျေးနှုန်း, တည်နေရာ, ကြယ်ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဧည့်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရမှတ်များပေါင်းစပ်ပြီးစုံလင်သောဟိုတယ်သေသပ်စွာမြေပုံပေါ်တွင်တင်ဆက်ရှာတွေ့
- ထိုသို့သောအစားအစာများ & ဖျော်ယမကာ, အပန်းဖြေဆွဲဆောင်မှုသင်အလှအပ & ကျန်းမာအဖြစ်ပိုပြီးကမ်းလှမ်းမှုရောက်စေဖို့ '' ဖျော်ဖြေရေး '' နှင့်အတူပေါင်းစည်း။
- Wego အတွင်းဖွင့်ကလပ်ယခု Wego ကမ်းလှမ်းချက်အဖြစ်အမည်ပြောင်းကြောင့်ယခုအားလုံးအသုံးပြုသူများသုံးစွဲနိုင်ဖြစ်ပါသည်
- Wego ကမ်းလှမ်းချက်များခံစားရန်ယခု app ကို Download လုပ်ပါ!
Wego လေကြောင်း, ဟိုတယ်, ခရီးသွား Books app ဆကျဆံ
9.49 ကို MB
PackPoint ခရီးသွား ...